Wasiirka arrimaha dibada DFS Cabdisalaam Cumar Hadliye oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Jabuuti - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaWasiirka arrimaha dibada DFS Cabdisalaam Cumar Hadliye oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Jabuuti
September 8, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ka guddoomaya safiirka cusub ee Jabuuti Aadan Xasan Aadan. Sawirka: Sonna.
Muqdisho-(Puntand Mirror) Wasiirka arrimaha dibada dowlada federaalka Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye ayaa maanta oo Khamiis ah ka guddoomay waraaqihiisa aqoonsiga Aadan Xasan Aadan oo ah safiirka cusub ee Jabuuti ay u soo magacowday Soomaaliya.
Kadib munaasabada guddoonka waraaqaha aqoonsiga, wasiirka iyo safiirka ayaa wada qaatay kulan saacado qaatay oo ay uga wada hadleen xiriirka laba geesoodka ah ee ka dhaxeeya labada dal.
Jabuuti ayaa ah dalkii lagu soo dhisay dowladii kumeel gaarka ahayd ee Carta sanadkii 2000, dalka yar ee kuyaala Geeska Afrika ayaa shirar badan oo lagu raadinayay in Soomaaliya in dib loogu soo cesho dowladnimadii iyo kala dambayntii qabtay muddooyinkii ay colaadaha sokeeye ka jireen Soomaaliya.
Sidoo kale Jabuuti waxay kamid tahay wadamada ku deeqay ciidamada holgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya.
August 14, 2016 Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo saxiixay dhismaha guddiga madaxa-banaan ee xuquuqul iinsaanka Soomaaliya